Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Hong Kong (Shina)
Hong Kong (Shina) RSS
Jolay 2015 1 Lahatsoratra Jona 2015 1 Lahatsoratra Mey 2015 2 Lahatsoratra
Novambra 2014 1 Lahatsoratra Oktobra 2014 13 Lahatsoratra
Janoary 2014 1 Lahatsoratra Novambra 2013 2 Lahatsoratra
Jolay 2012 1 Lahatsoratra Jona 2012 1 Lahatsoratra Mey 2012 1 Lahatsoratra Avrily 2012 4 Lahatsoratra
Desambra 2011 1 Lahatsoratra Novambra 2011 1 Lahatsoratra Septambra 2011 1 Lahatsoratra Aogositra 2011 1 Lahatsoratra Jona 2011 2 Lahatsoratra
Mey 2011 1 Lahatsoratra Marsa 2011 1 Lahatsoratra Novambra 2010 1 Lahatsoratra Septambra 2010 1 Lahatsoratra Aogositra 2010 2 Lahatsoratra
Jolay 2010 1 Lahatsoratra Avrily 2010 1 Lahatsoratra Marsa 2010 1 Lahatsoratra Septambra 2009 1 Lahatsoratra Mey 2009 2 Lahatsoratra
Jolay 2008 1 Lahatsoratra Mey 2008 1 Lahatsoratra Avrily 2008 1 Lahatsoratra Janoary 2008 3 Lahatsoratra
Oktobra 2007 1 Lahatsoratra Septambra 2007 1 Lahatsoratra Tantara misongadina mikasika ny Hong Kong (Shina)	01 Aogositra 2015 Hong Kong Manomana ‘Diaben'ny Nono’ Ho Fanoherana ny Didim-Pitsarana sy Fihetsiky ny Polisy Mahatsikaiky Mpanoratra Oiwan Lam · Fanoherana 01 Aogositra 2015 Hong Kong : Lahatsary Telo Manazava Ny Antony Mampizara Ny Fijerin'ny Olona Momba Ilay Volavolam-Panitsiana Fifidianana Avy Amin'ny Governemanta Mpanoratra Oiwan Lam · Fifidianana 30 Janoary 2015 Hong Kong : Manakalo Elo Amin'ny Harona Fiantsenàna Ny Hetsiky Ny Mpiaro Ny Demôkrasia Mpanoratra Oiwan Lam · Fanoherana Tantara Malaza Indrindra Manerantany 2 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaFankahalambahiny atrehin'ny Syriana mpitsoaponenana iray mikasa ho any Eoropa
Tantara mikasika ny Hong Kong (Shina) 27 Aogositra 2015
Sary Mampiseho Ny Fahasamihafana Ara-kolontsaina Eo Amin'i Hong Kong sy Shina Mpanoratra Oiwan Lam · Shina Vao haingana izay ny vondron'artista miorina ao amin'ny Facebook antsoina hoe Local Studio Hong Kong no namoaka andiam-pandravahana mitondra ny lohateny hoe "Hong Kong tsy i Shina", manamarika ny fahasamihafana eo amin'ny fiarahamonin'i Hong Kong amin'i Shina Tanibe eo amin'ny lafiny politika, sosialy, fiteny ary kolontsaina.
Manararaotra ny lazan'ny kolikolin'i Shina Tanibe ireo mpisoloky hanambakàna ny mponina ao Hong Kong Mpanoratra Oiwan Lam · Shina Niantso an-tariby ny olona ao Hong Kong ireo mpisoloky milaza fa polisy avy ao Shina tanibe, milaza ireo antsoiny ho mpandositra ka olona tadiavina ao Shina tanibe ka tsy maintsy mandoa vola raha te-ho afaka madiodio.
Manery Ny Governemanta Hanasazy Ny Uber Ireo Mpamily Taxi Ao Hong Kong Mpanoratra Sofus · Lalàna Manery ny governemanta mba hanasazy ireo tolotra mpanofa fiara tsy manana fahazoan-dalana tahaka ny Uber sy ny GoGo Van ireo mpamily taxi. Saingy milaza ny mpanjifa fa ahitana tombotsoa maro ny fahafahana mifidy tolotra fanofana fiara.
Pejin'ny shinglisy iray nambabo an'i Hong Kong tao anatin'ny indray alina Mpanoratra Hong Kong Free Press · Fiteny Resin'ity revy vaovao ity indray ny teny vary amin'akotry izay heverin'ny maro ho vary amin'anana mahazatra antsika malagasy.
Nofy Tsy Ho Tanteraka Ny Hahitàna Efitrano Ho An'ny Tena Samirery Ao Hong Kong Mpanoratra Sofus · Fampandrosoana Na ohatra aza ianao nahazo ny loka fanome amin'ilay lalao fisarihana lehibe indrindra ao an-tanàna, mety tsy hahavita hividianana efitrano akory ilay vola anjaranao.
02 Jona 2015
‘Vehivavy Mavo Volo Silantsilana’ Toy ny Ahoana No Mety Mitovy Amin'i Dalai Lama Mpanoratra I-fan Lin · Shina Nilaza ny Dalai Lama fa mety hiverina ho ‘vehivavy mavo volo silantsilana’ izy, na mety tsy hiverina hiaina mihitsy aza; nahatonga aingam-panahy ho an'ireo mpanao sarimiaina avy any Hong Kong sy Taiwan izany.
Mponin'i Hong Kong Maniry Ny Hiarovan'ny Lalàna Ireo Angon-drakitra Momba Azy Ao Anaty Findainy Mpanoratra Jennifer Zhang · Fahalalahàna miteny Should government agencies really be able to look at Hong Kongers' telephone metadata without any oversight from the courts?
Nohon'ny Famoahana ‘Tsiambaratelom-Panjakana’, Nogadrain'i Shina i Gao Yu, Mpanao Gazety Malaza Mpanoratra Oiwan Lam · Shina Nogadraina fito taona izy noho ny nanaovany tatitra momba ny torolàlana ho an'ny Antoko Kaominista izay mitanisa "zavatra fito tsy azo resahana" ho an'ireo mpampianatra eny amin'ny Oniversite, sy fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ary ireo hadisoana fahiny vitan'ny antoko
Hong Kong: Nolazaina fa Nidaroka Mpitandro Filaminana Ilay Mpanao Fihetsiketsehana Iray. Mandiso Izany Ny Lahatsary Porofo Mpanoratra Oiwan Lam · Fanoherana Niala tamin'ny fomba fanaony ireo mpivady mba hanampiana an'i Ho Pak-Hei, 17 taona, izay nafahana madiodio tamin'ny fitoriana azy. Mitsangana miaraka amin'ny porofo ireo olon-tsotra mahery fo sahala amin'izy ireo, maneho fa nampangaina tsy ara-drariny ireo mpanao fihetsiketsehana miaro ny demokrasia.
Hong Kong: Mianara Zavatra Avy Amin'ny Pub (Toeram-pisotroana Mafampàna)! Mpanoratra Tang · Fanabeazana Ampahany tamin'ny fandraisana andraikitra iray erantany nantsoina hoe "Raising the Bar" izy io, izay mikendry ny hametraka ny fanabeazana ho toy ny ampahany amin'ny kolontsaina malaza any an-tanan-dehibe. Tanàna fahatelo any Azia nampiantrano azy i Hong Kong.
Tselatra mikasika ny Hong Kong (Shina)
07 Aogositra 2008ShinaShina: Ny voasakana sy ny tsy voasakana
02 Aogositra 2008MadagasikaraMadagasikara tamin'i Hong Kong:”Avereno ny Emeraodanay”
17 Jolay 2008FanatanjahantenaHong Kong: Mividy vola
17 Janoary 2008ShinaShina sy Hong Kong: Jet Li sy ny fitiavan-tanindrazana
Asehoy daholo Tselatra mikasika ny Hong Kong (Shina) »Araho Twitter